Barri 2017 lakkoofsotaan yoo ibsamu - BBC News Afaan Oromoo
Barri 2017 lakkoofsotaan yoo ibsamu
Amajjii irraa qabee hanga ammaatti taateewwan gurguddoo ta'an haaloota ittiin ibsan keessaa tokko lakkoofsota namoonni baayyee hin hubannetti dhimma bahuudha. kanuma sababeefachuun lakkoofsota kana walitti qindeesineerra.
Qindoominni biyyoota IS iratti duulaniifi Ameerikaan dursitun lakkoofsa haleellaawwan bombii fi misaayelaa mudde irraa eegalee Siiriyaa fi Iraaq irratti raawwatameedha. Raashiyaanis haleellaa walfakkaatu raawwatus lakkoofsi isaa hin ibsamne. lakkoofsi lammiilee nagaa balaa kanaan lubbuu isaanii dhabaniii akka gabaasa Waashiingitanii fi Moskootii bahuu osoo hin taane sanaa ol ta'uu mala yaadni jedhu jira. haata'u malee duulli kun garee IS kutaalee biyyoota Siiriyaa fii Iraaq baayyee keessaa ari'uu danda'eera.
Kun lakkoofsa Voolkaanoowwan socho'oo biyya addunyaa irratti dhohiinsa voolkaanoo heddu qabdu, Indoneezhiyaati. Sadaasa darbe,gaarri Aguungi dhoyee namoota kumaata kitila qe'eerraa buqqise.
Goodayyaa suuraa Barri 2017 lakkoofsaan
namoota miiliyoona 1.7
Akka gabaasa maddeen adda addaatti kun lakkoobsa namoota tuwiitara isaaniirratti mallattoo riqichaa, #metoo, tuquun miidhaa sababa koorniyaan ga'aa ture kan qooda fudhataa fiilmii beekamaa Harvey Weinstein dabalatee Indastiriin fiilmii Holiiwuud itti komatame irratti balaaleffataa turaniidha. Dubartoonni biyyoota 85 irraa warraaqsa kana keessatti hirmaataniiru.
Kun lakkoobsa badhaafamtuu badhaasa noobelii kan taate pirezidaantiin Barmaa Aung Saan Suu Kii darararaa Hawaasa Roonjaa irra ga'aa ture sagalee tokkoon mormaniidha. Jaalleewwan wajjin badhaafaman dabalatee, hawaasni idila addunyaa gaafataa turus pirezidaantittiin garuu dararaa warra Roohiinjaarra ga'aa ture si'a zeeroo mormite. Akka dhaabbata gargaarsaa Doctors Without Bordersitti bara 2017 keessa muslimoonni Roohiinjaa 6,000 kanneen daa'imman umuriinsaanii waggaa 5 gadii 750ni keessatti argaman ajjeefamaniiru. Ji'a fulbaanaa keessa pirezidaantittiin kun oduu saobaati jechuun dhugaa kana kuffisanii turan.
Ulaawwan kubbaa miillaa 812
Cabbiin A68 jedhamu kan lafa cabbaawaa guddicha Antarkitikaa ,the Larson C glacier jedhamu irraa fottoqe Waancaawwan addunyaa itti aanan 12 iddoo tokkotti gaggeessuuf ni ga'a. Akka saayintistoonni jedhanitti ho'a addunyaatu kana fide.
Guyyaatti yeroo 44
Akka ogeeyyii fayyaatti, kun lakkoobsa sigaaraa jiraattonni New Delhi guyyaatti qilleensa faalame keessaa wayita harganan xuuxaniidha. Kan ta'es jalqaba ji'a Sadaasaa keessa ta'e. Indiyaan magaalota qilleensi isaanii faalamoo 20 akka addunyaatti jiran keessaa 10 qabdi.
Daldalli maallaqa Bitcoiniin taasifamu bu'aa Doolaa Ameerkaa 20,00tti siqu ji'a muddee keessa argachuun kan bara 2016 waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dibbeentaa 1600 guddateera.
Iddoo daakaa bishaanii Olompikii miiliyoona 60
Roobni bubeen wal make Hurricane Harvey jedhamu bishaan leetira tiriiliyoona 150 ji'a Hagayyaa keessa Ameerkaa magaalaa Houstan, Teksaas, keessatti gadi naquun balaa hamaa geessise. Akka ragaan biyyaalessaa mul'isutti bishaanni kun iddoo daakkii bishaanii Olompikii miiliyoona 60 kan uwwise ture.
Lakkoobsa namoota bebbeekamoo bara 2017 keessa du'anii(hanga Muddee 22),bara suukanneessaa namoonnii bebbeekamoon itti galaafataman, akka marsariitiin du'a warra akkanaa tilmaamu Death list.net, kaa'etti. kanneen du'an keessaa hundeessaan barruu Playboy Hugh Heffner, lammiin kanaadaa Jerry Lewis, dureessi David Rockefeller, abbaan muuziqaa Toom Petii,Fats Domino fi Glenn Campbell nama TV irratti daran jaallatamtu Merry Tyler Moore isaan muraasa.
Lakkoofsi sagalee Idil addunyaa kan ejensiin gorsaa fi sodaa siyaasaa Eurasia Poll jedhamu baase akka mul'isutti Pirezidaantiin Biraaziil Michel Temer sagalee mirkana dhugoomsu dhibbeentaa sadi qofa argatan, qorannoo hanga yoonaatti geggeeffameen isa dhumaati. Matumaa, fooyya'iinsa kan jedhame dhibbeentaan ja'ayyuu bakka isaan itti kufanii kaasuu hin dandeenye.